Muscle – Healthy Life Journal
All posts tagged "Muscle"
သင့်ကျန်းမာရေးကို မထိခိုက်စေဘဲ ကြွက်သားတည်ဆောက်ပေးမည့် နည်းလမ်း ၃ ရပ်
———၊ ကိုထက် ၊——— ကျန်းမာရေးထိခိုက်တဲ့အထိ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဒဏ်ဖြစ်တဲ့အထိ လေ့ကျင့်နေထိုင် စားသောက်စရာမလိုဘဲ ကြွက်သားသန်စွမ်းအောင် တည်ဆောက်ပေးနိုင်မယ့် နည်းလမ်းတွေ ရှိနေပါတယ်။ (၁) အစားအသောက် ကြွက်သားတည်ဆောက်ဖို့ ကြိုးစားမှုက မီးဖိုချောင်ထဲမှာ စပါတယ်။ ဘယ်လိုအစားအသောက်တွေစားတယ်၊ အစားအသောက်တွေကို ဘယ်လောက်ပမာဏ စားတယ်ဆိုတာတွေက...
စိတ်ပင်ပန်းဖိစီးနေပါက လုပ်ကိုလုပ်သင့်သည့် နှိပ်နယ်နည်း ၅ ရပ်
———၊ ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— နှိပ်နယ်တဲ့ကုထုံးက စိတ်ဖိစီးမှုကို တကယ်လျော့ကျစေတယ်လို့ လေ့လာမှုတွေက ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်နေ့လုံး ပင်ပန်းဖိစီးနေချိန်မှာ ကျွမ်းကျင်တဲ့ နှိပ်နယ်ပေးသူ မရှိတဲ့အခါ ဘယ်လိုများ လုပ်ရပါ့မလဲလို့ တွေးနေမိပါသလား။ အိမ်မှာရှိတုန်း၊ အလုပ်ကနေ ခဏအနားရတုန်း လုပ်လို့ရမယ့်...
အမျိုးသားတို့ ကြွက်သားထုထည် သန်စွမ်းစေမည့် လေ့ကျင့်ခန်း ၈ မျိုး
———၊ လရိပ်မေ ၊——— (၁) ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်ခြင်း တစ်ကိုယ်လုံးရှိ ကြွက်သားအားလုံးကို ထိရောက်စေမယ့် လေ့ကျင့်ခန်းက ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်မောင်း၊ ပခုံးနဲ့ ခြေသလုံးကို သန်စွမ်းစေပါတယ်။ ကျောပြင်အပေါ်ပိုင်းမှာ ဝိတ်တန်းကိုတင်ပြီး ပခုံးအကျယ်ထက် နည်းနည်းပိုဟပြီး ကိုင်ထားပါ။ တင်ပါးကို နောက်ပစ်ပြီး...
ပါမောက္ခဦးနေဝင်း (အရိုးခွဲစိတ်အထူးကုဆရာဝန်ကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း) Q. ကြွက်သားမလှုပ်ရှားနိုင်ခြင်း (Paralysis) ဆိုတာ ဘာကိုဆိုလိုပါသလဲဆရာ။ A. Paralysis ဆိုတာက ကြွက်သားတစ်ခု ဒါမှမဟုတ် ကြွက်သားအစုတစ်ခု အလုပ်မလုပ်တော့တဲ့အတွက် အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ မလှုပ်ရှားနိုင်တော့တာကို ဆိုလိုပါတယ်။ ဒီရောဂါဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေက အများကြီးရှိပါတယ်။ အဓိကကတော့...
သင့်ခန္ဓာကိုယ်က မဂ္ဂနီဆီယမ်ဓာတ် လိုအပ်နေကြောင်းပြသသည့် လက္ခဏာ ၉ ရပ်
စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) အဆက်မပြတ် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုဖြစ်နေရင်၊ မျက်လုံးတွေက အကြောဆွဲသလိုလှုပ်နေရင်၊ ကြွက်သားလှုပ်နေရင် သင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာ မဂ္ဂနီဆီယမ်ဓာတ် ချို့တဲ့နေတာ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မဂ္ဂနီဆီယမ်ဓာတ်က ခန္ဓာကိုယ်ထဲက ဖြစ်စဉ်အများစုမှာ လိုအပ်နေတဲ့အတွက် မဂ္ဂနီဆီယမ်ဓာတ်ချို့တဲ့တာက ပြင်းထန်တဲ့ နာမကျန်းမှုကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ မဂ္ဂနီဆီယမ်ဓာတ်ချို့တဲ့ရင် အောက်ပါလက္ခဏာတွေ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။...
ကျို့ထိုး သက်သာနည်းများ (Hiccups)
ဒေါက်တာတင့်ဆွေ ကျို့ထိုးတာဟာ ရင်ခေါင်းနဲ့ ဝမ်းဗိုက်ကိုခြား ထားတဲ့ Diaphragm ခေါ်တဲ့ ကြွက်သားပြားပြားခုံးခုံးကြီးက အလုပ်ပိုလုပ်တာဖြစ်တယ်။ သူ့အောက်မှာ ညာဘက်က အသဲ၊ ဘယ်ဘက်က အစာအိမ်ရှိတယ်။ အဲဒီ ၂ခုထဲက တစ်ခုခုမှာ တစ်ခုခုဖြစ်ရင်ကျို့ထိုးတယ်။ အများဆုံးက လေကြောင့်ဖြစ်တယ်။ တချို့မှာ အစပ်စားလိုက်တာနဲ့...
မေး. လည်ပင်းချိုးတာကို မကြာခဏလုပ်မိနေပါတယ်။ လည်ပင်းမချိုးရရင် မနေနိုင်လောက်အောင်ပါပဲ။ လည်ပင်းမချိုးရမနေနိုင်အောင်မဖြစ်ဖို့ ဘယ်လိုလုပ်ပေးသင့်ပါသလဲ။ Thiri (FB) ပါမောက္ခဦးနေဝင်း (အရိုးခွဲစိတ်အထူးကုဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ. ဒါက လည်ပင်းတင်းတောင့်လို့ ဖြစ်တာပါ။ ဒါမျိုးက ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ လည်ပင်းအနေအထားက ပုံမမှန်တဲ့အတိုင်း အကြာကြီးနေတာ၊ စာအကြာကြီးဖတ်တာ၊...
ကြွက်သားယိုယွင်းထိခိုက်ခြင်း အစောပိုင်းလက္ခဏာ ၈ မျိုး
မီမိုးမေ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ကြွက်သားယိုယွင်းထိခိုက်မှုက တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ပိုဆိုးလာတဲ့ အခြေအနေဖြစ်ပြီး သင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ကြွက်သားဆဲလ်ဆုံးရှုံးမှု ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ကြွက်သားယိုယွင်းထိခိုက်တဲ့ လက္ခဏာတွေက အသေးအမွှားလက္ခဏာအနေနဲ့ စတင်တတ်ပေမယ့် သတိမပြုဘူး၊ ကုသမှုမခံယူဘူးဆိုရင်တော့ အချိန်နဲ့အမျှ ဖြည်းဖြည်းချင်းပိုဆိုးလာပါလိမ့်မယ်။ (၁) ကြွက်သားနာကျင်တောင့်တင်းခြင်း ကြွက်သားဆဲလ်ဆုံးရှုံးမှုကြောင့် ကြွက်သားအားနည်းတာကို ခံစားရနိုင်ပါတယ်။...
ကြွက်သားဖွံ့ထွားချင်ပါတယ် . . .
မေး ။ ကြွက်သားသန်စွမ်းချင်တယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုနည်းတွေနဲ့ စားသောက်ပေးသင့်ပါသလဲ။ ပါမောက္ခဦးနေဝင်း(အရိုးခွဲစိတ်အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) မှ ပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ ။ ပုံမှန်ခန္ဓာကိုယ်အလှ (Body Beauty)ရအောင် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် ကိုယ့်အရပ်အမောင်း၊ ခန္ဓာကိုယ် အနေအထားပေါ် မူတည်ပြီး အမျိုးသားတွေရော အမျိုးသမီးတွေပါ ကြွက်သား...